Agri & Mashiinka Mashiinka & Qalabaynta Cuntada & Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Maxaad Ugu Baaqaysaa Dhirta Qurxinta Badan Ee Beertaada?
Digirta Kookaha - Cunnada ugu Fiican ee Organic
Digirta kookaha: Digirta kookaha ama kookaha oo keliya ayaa ah iniinyaha la wada ilaaliyay ee gebi ahaanba-khamiirka badan ee Theobroma cacao. Waxaan ka soo saari karnaa waxyaabaha adag ee kookaha (isku dar ah waxyaabo aan dufan lahayn) iyo subagga kookaha (dufanka). Digirta kookaha ayaa ah isha shukulaatada. Taariikh kooban oo ah digirta kookaha: Kookahu wuxuu ahaa dalag si fiican loo aasaasay iyo shey ka mid ah […]Read More
Bixiyeyaasha Sifeeyaha Biyaha - Helitaanka Biyo Nadiifiyeyaal Tayo ah
Maaddaama dad badan oo adduunka ka mid ahi ay ka walaacsan yihiin biyaha ay cabaan una isticmaalaan karinta, waxaa sii kordhaya baahida loo qabo sahayda biyaha lagu daweeyo. Tan ka sokow, tayada biyuhu waxay noqotay mid ay dadku ka walaacsan yihiin koritaanka cudurada ka dhasha biyaha, gaar ahaan daacuunka iyo tiifowga. Nasiib darrose, qalabka daaweynta biyaha badankood […]Read More
Bambooyin Beeraha - Sida Loo Helo Badeecad
Xirfadda bambooyin-beereedka waa mid soo jiidasho leh. Waa ganacsi gaar ah oo ku lug leh heerar sare oo xirfad iyo aqoon ah. Si kastaba ha noqotee, inta badan bambooyinkan waxaa loo isticmaalaa meelaha ay ku yaalliin biyaha waraabka ama kalluunka taranka, sidaa darteed mashiinadu aad ayey u badan yihiin. Mashiinnada makiinadda soo saarta ayaa jiray illaa iyo markii Warshadaha […]Read More